IIPLANI ZEKHITSHI EZINGAMA-53 EZIPHEZULU EZIPHEZULU (EZINEEKHABINETHI ZENDALO YENDALO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iiplani zekhitshi ezingama-53 eziPhezulu eziPhezulu (ezineeKhabinethi zeNdalo yeNdalo)
Iiplani zekhitshi ezingama-53 eziPhezulu eziPhezulu (ezineeKhabinethi zeNdalo yeNdalo)
Wamkelekile kwigalari yethu yoyilo lwangoku lwekhitshi. Ezi khitshi zinika inkuthazo yokuphucula ubeko lwekhitshi lakho, ukugcinwa, ukugqitywa, izimbo kunye nokunye. Siyathemba ukuba la makhitshi aya kubonelela ngemibono emitsha yokulungisa kwakhona okanye ukuphucula ikhaya lakho.
Ikhitshi elingentla linoluvo lwangoku, ukudibanisa imibala emnyama kunye nokukhanya ukwenza umahluko omhle. Iindonga zazipeyintwe kumbala wangwevu ongwevu wombala onceda ukuvelisa ubuhle bendalo bekhabhathi zekhitshi laseMahogany kunye nokunceda iindawo zokubala ezimhlophe ezomeleleyo kunye negrey & white white back splash tiles pop out well. Iibarstools ezisetyenziswa kwisiqithi sekhitshi ziyahambelana nemibala yegumbi, kusetyenziswa izihlalo ezimhlophe eziphakanyisiweyo kunye nemilenze yaseMahogany.
Iikhabhathi zekhitshi zangoku
Iikhabhathi zekhitshi yangoku yeWalnut
Iikhabhathi zekhitshi zangoku zeMahogany
Iikhabhathi zasekhitshini eziKhanyayo zangoku
Iikhabhathi zeMephu eziMnyama zale mihla
Iikhabhathi zala maxesha zeNkuni eziMnyama
Iikhabhathi zangoku zokuKhanya kweNkuni
Iikhabhathi zekhitshi zale mihla ze-Oak
Iikhabhathi zangoku zihlala ziphazamisa imigca phakathi kwendabuko neyangoku. Ngemigca ecocekileyo, ukugqitywa kwemithi yendalo kunye nezixhobo, iikhabhathi zangoku zijongeka zinesibindi kwaye zintle. Ezinye zezinto ezinxulunyaniswa nekhabhathi yala maxesha kukusetyenziswa kweenkuni zendalo, imigca elula elula kunye neemilo zejiyometri, kunye nezinto ezimbalwa zehardware. Nazi izimvo zekhabinethi yanamhlanje zokukunceda ufumane eyona ikulungeleyo. Jonga igalari yethu yamva nje ye- iikhabhathi zekhitshi zangoku Apha.
Uyilo lwekhitshi lwanamhlanje ludibanisa ngempumelelo i-aesthetics yanamhlanje kunye neyasekhaya, kuyila uyilo olungaphelelwa lixesha oluya kubhenela kubo bonke abathanda izinto zangoku nezesiko. Iikhabhathi zokhuni eziqinileyo ezenziwe ngamaplanga ziyindibaniselwano ye-rustic walnut kunye ne-oki ekhethiweyo, yenza umahluko omnandi wokukhanya kunye nomnyama ogqityiweyo. Izinto zokubala ziyimhlophe eqinileyo yomgangatho we-quartz wokugqibela ongenamthungo, kodwa enye yeziqithi zasekhitshini isebenzisa ilitye elimhlophe lesepha ukongeza umbala ngakumbi kunye nephethini.
Ikhitshi langoku elisebenzisa iikhabhathi zasekhitshini eziphefumlelweyo zemveli zisebenzisa iingcango zomthi oqinileyo ekugqityweni okumnyama kwe-mahogany. Oku kubhangqiwe ngombala ocacileyo omhlophe ocacileyo womgangatho kunye neetayile zemibala yeglasi yokubuyela umva kwimibala eyahlukeneyo engwevu enceda ukongeza ubume kunye nombala kumphezulu. Idityaniswe neendonga ezimhlophe nezimvi kunye nokugqitywa kweethayile zomgangatho, le khitshi inika uvakalelo lwangoku kodwa olufudumeleyo nolwamkelayo.
Eli khitshi langoku linombala omnyama kunye nesakhiwo esikhulu esivulekileyo, esenza ikhitshi elibonakala likhulu elinombala omkhulu kunye nemibala. Iikhabhathi zekhitshi zingumthi oqinileyo kunye noyilo lwanamhlanje lwepeyinti emnyama egqityiweyo, enezinto zokubala ezimnyama ezingwevu ezimnyama ezifana nekhonkrithi kwisiqithi sasekhitshini, kunye nomphezulu omnyama oqinileyo wokubala wekhitshi. Isebenzisa iithayile zombala ongwevu ezingwevu ezikhethekileyo kwi-backsplash, ukongeza ubume obunomdla kunye nomxholo kumphezulu okwancoma ipeyinti yegrey kwiindonga.
Uphahla oluphezulu lwale khitshi yanamhlanje lwonyusa ukuziva konke kwendawo, kunye nokunika umbono wekhitshi elikhulu. Kukho indibaniselwano yeekhabhathi eziphakamileyo ngokupheleleyo, izixhobo zokubala ezisisiseko kunye neekhabhathi ezingaphezulu, kunye nesiqithi sekhitshi. Zonke zazilaminishwe ngomthi womlotha, zinika umbala ompunga ongathathi hlangothi ukuxhasa iindonga ezinombala okhanyayo. Ngaphezulu kwekhawuntari kunye ne-backasplash, ilitye lendalo elisetyenzisiweyo kumbala wekrimu, ukuthelekisa iindonga.
Eli likhitshi elihle lanamhlanje elisebenzisa iikhabhathi zekhitshi eziqinileyo ezibukekayo ezibhangqwe nelitye elimhlophe elinepumlo elisicaba lokwenza imbonakalo yanamhlanje, ukanti zibonelela ngeepateni zendalo ezongezelelweyo. Eli khitshi lineefestile ezinkulu zemifanekiso ziikhawuntari, zinceda ukukhanyisa ikhitshi, kwaye zizise imibala kunye nezinto zangaphandle ezibonakala ziyinxalenye yekhitshi. Kuba le khitshi inkulu kakhulu, kwaye indawo ephezulu yekhabinethi ihleli ngeefestile ezinkulu, ikhabhathi epheleleyo yokuphakama ibandakanyiwe kuyilo nakwisiqithi esikhulu sekhitshi esinogcino lwekhabhathi eyongezelelweyo.
Ukuya kukhangela ngokukhaliphileyo, le khitshi inebhalansi elungileyo yesibheno sanamhlanje nakwimveli. Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama zaseMahogany zomthi zazidityaniswe nezinto zokwenza izinto zexabiso le-granite ephezulu, zisinika isibheno esiqhelekileyo. Iithayile zomgangatho ongwevu nazo zongeza kwinkangeleko yanamhlanje yendawo, ngelixa iindonga ezimthubi zeentyatyambo zigqibezela igranite ye beige kakuhle.
Sebenzisa iikhabhathi zokhuni eziqinileyo ezifakwe ngamaplanga ezigqityiweyo ngombala omnyama wecherry, eli khitshi linesibindi kwaye livakala kakhulu kulo, ngaphandle kokuba neendawo ezingathathi cala. Iindonga zimhlophe ngokungagungqiyo kwaye imigangatho yikhilimu ekhanyayo ekwa nceda iithoni ezibomvu / zeorenji zokugqitywa kweenkuni ze-cherry ukuba ziphume kakuhle. Ukongeza into ebaluleke ngakumbi kuyilo, i-marble yayizinto ezikhethiweyo kwi-countertop, edibene ne-beige, ukhilimu kunye neetayile zeglasi ezinemibala emdaka.
ishawa yomfazi oza kubulela
Ukuya kwiimvakalelo zangoku kunye nezobudoda, olu uyilo lwekhitshi luya kwisikimu sombala omnyama nomhlophe. Endaweni yokusebenzisa ii-laminates ezimnyama, nangona kunjalo, ivula ukusebenzisa ukugqitywa kweduco emnyama kwiingcango eziqinileyo zepaneli ukuyinika ubume ngakumbi kunye nokuziva kwendalo. Ukugqibezela inkangeleko yale mihla, ikhawuntala ephezulu esetyenzisiweyo icacile indawo emhlophe eqinileyo yokujonga ngaphandle komthungo.
Indawo enkulu yomgangatho kunye noyilo oluvulekileyo lwenza ukuba eli khitshi libonakale likhulu ngokwenyani. Iikhabhathi zekhitshi ezenziwe ngomthi zine-matte duco finish, engabonisi ziinkozo zomthi, kodwa ibonisa imibala yendalo efudumeleyo. Iithowuni zeorenji zekhabhathi zasekhitshini zihambelana kakuhle namthubi wegrey walnut kunye nekhawuntara enombala wegranite esetyenzisiweyo. Ukongeza ubume obuninzi, iithayile zangaphantsi zendlela ezisetyenzisiweyo zazisetyenziselwa ukubuyela umva.
Uyilo lwekhitshi lwangoku olukwaziyo ukwandisa indawo ekhoyo eludongeni kunye nokuphakama kwesilingi yokugcina ikhitshi. Iqukethe iikhabhathi zemithi yetiak yendalo eneqweqwe elimnyama lokubala kunye nokuhombisa iithayile ezimnyama zemosafplash. Uya kubona ukuba uphahla oluphezulu lwenziwe nkulu ngokubeka iikhabhathi eziphantse zafikelela kumgama ophakamileyo ophakamileyo weemitha ezi-3. Ngenxa yokusebenzisa indawo ngokugqwesileyo, ikwanendawo yokutya eyakhelweyo ngaphakathi kunye neekhabhathi zokubonisa ezenza ukuba iipleyiti zifikeleleke kwaye zibonakale. Ngaphezulu kwayo yonke le khitshi inika ibhalansi elungileyo yemibala efudumeleyo kunye emnyama.
Olunye uyilo lwangoku lwekhitshi olusebenzisa ubuchule bokwenza i-duco ukufezekisa ukujongwa kwemithi yendalo. Kulo mzekelo, ukugqitywa kwe-mahogany kwafakwa kwiikhabhathi zekhitshi ezilungiselelwe ngokulula, ezifakwe umphezulu omhlophe oqinileyo kolo jongo lwanamhlanje olungenamthungo. Ukugcwalisa i-countertop ziithayile zamatye ezenziwe ngombala ongwevu ezingadibanisi umbala omncinci kuphela kumphezulu wodonga, kodwa zongeza ubume kunye nephethini ngokunjalo, ziyenza ibonakale inomdla ngakumbi.
Enye yezona zinto ziphambili kuyilo lwekhitshi ziya kuba ziintlobo ngeentlobo - eli khitshi aloyiki ukunamathela kwisitayile esinye kuphela, njengoko ngokudibeneyo sidibanisa ukugqitywa kunye nezitayile ezahlukeneyo. Kwindawo esisiseko, sineendonga ezenziwe nge-cream, imigangatho yelitye elikhanyayo kunye nesilingi enemikhondo eveziweyo kunye neeplanga zomthi wecherry. Ikhitshi ngokwalo kwelinye icala libonisa indibaniselwano yeeklasi zasekhitshini zekhitshi kwimithi eqinileyo ye-mahogany kunye neekhabhathi zanamhlanje ezilaminethiweyo. Ukunceda ezi ntlobo zimbini zibukeke zindawonye, ​​izixhobo zokubala zamatye ezifanayo zazisetyenziselwa zombini, ngelixa isiqithi sasekhitshini sisebenzisa uhlobo olwahlukileyo lwamatye e-slab ukugcwalisa ubumdaka obuluhlaza bekhawuntara ephambili kunye nomqolo obuyela umva.
Eli khitshi lisebenzisa ngokupheleleyo indawo ekhoyo eludongeni ukuze kubekwe udonga olupheleleyo lweekhabhathi zokugcina. Eli khitshi langoku lisebenzisa iikhabhathi ezintle zomthi we-teak ezihonjiswe nge-beige granite ngenkangeleko entle kwaye idityaniswe ngeethayile ezingwevu ezingwevu zokubuyela umva. Udonga apho uluhlu lokupheka lwalubekwe ngokuchasene nolwenziwe ngentsimbi engafakwanga eludongeni ukuze lube nococeko ngakumbi kwaye kucoceke lula indawo eya kuthintela ukwakhiwa kobumdaka.
Uyilo oluvulekileyo lwale khitshi lusebenzisa kakhulu ukubonwa kwefestile kwaye luvulekele kwigumbi lokutyela. Olunye lweempawu eziphambili zokuma kwesi sithuba sisiqithi esisembindini nesitovu saso esakhelweyo kunye neekhabhathi. Indawo eseleyo ibonelela ngeekhabhathi zeenkuni ezifanayo ezityebileyo ngombala omdaka wegranite kunye nomgangatho owenziwe ngomthi.
Le khitshi ine-rustic kunye neklasikhi evakalelwa kuyo ngaphandle kokusebenzisa iikhabhathi zemodyuli zangoku. Iingcango zomthi oqinileyo zisebenzisa i-rustic walnut wood, inika ukujonga okungaphaya kokumnyama ekhitshini, ngakumbi kuba iindonga sele zimnyama kancinci njengoko zipeyintwe kwigrey. Isilingi iphakame ngokufanelekileyo, kwaye uninzi lwayo lusetyenziselwa ukugcinwa kwekhabhinethi ephezulu. Kwitafile, kusetyenziswe i-marble emhlophe ene-veinings emnyama emnyama, kwaye kwi-backsplash, kusetyenziswa iithayile zemodeli yedayimane kwimibala eyahlukeneyo emdaka, ukongeza zombini ukuthungwa kunye nepateni kwindawo.
Uphawu olwahlukileyo lweli khitshi luya kuba ziipateni zejiyometri kunye neemilo ezisetyenzisiweyo kuyilo. Ikhitshi ngokwalo lilula kakhulu - iiteksi zomthi we-teak, iindonga ezimhlophe, iikhabhathi zekhitshi zomthi oqinileyo kumnca omnyama ogcwele isitopu esimhlophe se-quartz. Uya kubona ukuba isiqithi sekhitshi esibekwe ngokwahlukeneyo sinesimo esikhethekileyo sejiyometri ethe ngandlel 'ithile yafanisa ipatheni ye-chevron yeethayile zomqolo ezisetyenzisiweyo. Ikongeza izinto zoyilo zorhwebo, ezinje ngezitulo zebar ezinemilenze yentsimbi kunye nezibane ezibengezelayo ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi.
Isicwangciso somgangatho ovulekileyo senza ukuba eli khitshi libukeke likhulu ngokwenyani, ukongeza kwinto yokuba indawo yokuhlala ayikanikwa, eyenza umbono ovela kwifestile enkulu yemifanekiso ubonakale kwicala lasekhitshini. Iingcango zekhabhinethi ekhitshiweyo zenziwe ngokudibanisa i-walnut ekhethekileyo kwisiqithi esikhulu sekhitshi, kunye nokugqitywa okumhlophe okupendjiweyo kwiikhabhathi eziphambili. Isiqithi esikhulu sekhitshi sisebenzisa ilitye lesepha elimhlophe elino-flat edging kwi-counter top, ngelixa ezona zinto ziphambili zekhitshi zisebenzisa i-granite emnyama kunye neethayile zelitye elenziwe ngodongwe kwi-backsplash. Le khitshi yanamhlanje ibonelela ngendawo yokulungiselela efanelekileyo efanelekileyo ekusebenziseni imisebenzi emininzi kunye nabasebenzisi abaninzi bekhitshi ngokuhamba kakuhle kwezithuthi.
Eli khitshi labelana ngendawo yalo kunye nendawo encinci yokutyela, kodwa ngenxa yophahla oluphezulu kunye neefestile ezinkulu zemifanekiso, indawo ijongeka inkulu kwaye inomoya. Kukho iindonga ezimbini ezineekhawuntari zasekhitshini kunye neebhari ezimbini zebar, ezivumela indawo enkulu yokulungiselela ukutya kunye nezinye iinjongo. Iikhabhathi zazifakwe ngokulingeneyo ngokugqitywa komthi we-walnut ukufanisa umbala weengcango, ngelixa i-countertop isebenzisa i-slabs eshinyeneyo yelitye lesanti ekhanyayo. Eminye imiphezulu yekhitshi igcinwe icacile- iindonga zimhlophe, kwanobuya umva upeyintwe ngombala omhlophe, ngelixa iithayile zomgangatho lilitye lentlabathi lendalo kunye nombala okhanyayo.
Ngaphandle kobukhulu obuncinci beli khitshi lwanamhlanje, ubeko oluvulekileyo lwendlu luyenza ibonakale ibanzi kwaye inomoya, idala imvakalelo elula. Imibala ebomvu umbala obalaseleyo kolu luyilo, ngakumbi kuba imigangatho isebenzisa iinkuni ze-cherry eziqinileyo. Oku kudityaniswe nekhabhathi emnyama emnyama, iitafile zomgangatho oqinileyo omnyama kunye neethayile ezimnyama zemosaic. Kukho ukukhanya kwesibhakabhaka ngaphezulu kwekhawuntala yasekhitshini, ukuyinika ugxininiso ngakumbi kunye nokongeza ukukhanya kwendalo kwisithuba.
Uyilo lwangoku lwekhitshi olunje ngolu joliso lwanamhlanje ngezixhobo zanamhlanje. Uyilo olulula lubonelela ngodonga olupheleleyo lwekhitshi kunye nekhawuntara yebha kwicala elichaseneyo, ibekwe kwisicwangciso somgangatho ovulekileyo. Iikhabhathi ziyilnut emnyama ngetafile emhlophe ye quartz. Iithayile zokubuyela umva ezisetyenzisiweyo zinombala wesilivere owahlukileyo owongeza ubume obukhethekileyo kwisithuba.
Indawo yokuma kweli khitshi sisiqithi sayo esikhulu kakhulu esinendawo ephantsi kwekhabhathi. Iindonga zeli khitshi lipheleleyo lindibaniselwano ye-beige kunye nomhlophe ocacileyo, odityaniswe nge-grey ceramic tile flooring. Akukho kukhanya kwendalo kwisithuba, ke ukukhanya kokuzenzela kwakusetyenziselwa ukubuyekeza ukungabikho kwako. Imibala engathathi hlangothi yeendonga ibonelela ngemvelaphi entle kwiingcango zekhabhinethi yekhitshi eqinileyo kunye nezinto zokubala zamatye.
Ukudityaniswa kweziqwenga zala maxesha nezesintu zelixesha, le khitshi inembonakalo eyahlukileyo nehlaziyayo. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa isiseko seplanga le-mahogany esine-white seamless surface counter counter nayo kunye ne-back splash. Ukuyinika ukuziva ngakumbi njengesixhobo esenziwe ngegolide, izitena zomthi eziqinileyo zesitayile senkulungwane kunye nesibane segolide esijinga ngaphezulu kwesiqithi sekhitshi.
Ikhitshi lale mihla elandisa imvelaphi emhlophe eqaqambileyo ngokusebenzisa iikhabhathi ezimnyama zaseMahogany. Ngenxa yemvelaphi yokukhanya, umbala weekhabhathi uphuma kakuhle. Ngaphezulu kwekhawuntari, umphezulu omhlophe oqinileyo wawusetyenziselwa umphezulu wokubala ongenamthungo.
Ngemvelaphi engathathi hlangothi kunye nokukhanya okuhle kwendalo, kulula ukusebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimnyama kunye neekhawuntari ngaphandle kokwenza ukuba indawo ibonakale imnyama. Oku kuxhamle kakhulu kuyilo. Iikhabhathi zasekhitshini ezimnyama zaseMahogany ezinesipili esihle ezigqityiweyo zidityaniswe namabala okubala egranite emnyama ukwenza ubukhazikhazi banamhlanje kodwa bujongeka.
Ikhitshi linobume obukhethekileyo kunye nokuqhelaniswa ngenxa yendawo elikuyo kwikona yegumbi. Ikhitshi lahlulwe kwindawo eseleyo ngekota yesangqa yekhitshi yesiqithi. I-Mahogany lukhetho lwekhabhathi njengoko luhambelana nemiqadi yeplanga yokuhombisa eluphahleni. Ngaphezulu kwekhawuntari kunye nokubuyela umva, igranite emnyama kunye neethayile ezimnyama zenziwe ngokulandelelana.
Ikhitshi lwanamhlanje elinombala omnyama ngaphezulu kwako konke. Ilitye lendalo elikhonkxwe kwiikholamu, ityholo yomthi eveziweyo kunye neentsimbi ze-I-beams ezenziwe ngebala ezimnyama zongeza zombini imeko ye-rustic kunye neyamashishini kwindawo leyo, inika isibheno esahlukileyo. Ngaphandle kokuziva okumnyama kwendawo, kukho ukukhanya okwaneleyo kwendalo okuvela kwiifestile ezinkulu zemifanekiso yendlu. Iikhabhathi zekhitshi zithe saa ekhitshini lonke ngakumbi kuba akukho ndawo yeekhabhathi ezingaphezulu. Izinto zokubala eziphambili zekhitshi zineengcango zomthi oqinileyo kunye nesidumbu esipeyintiweyo ngombala ongwevu, ngelixa i-L-shape yesiqithi / ibar counter isebenzisa ukugqitywa komthi omnyama we-mahogany. Izinto zokubala ezisetyenziswa xa kuthelekiswa nekhabhathi esisiseko, kwaye ngenxa yoko, imarble emhlophe yayisetyenziswa kwisiseko se-mahogany, ngelixa i-granite emnyama yayisetyenziselwa isiseko esingwevu.
Ukugqitywa kweenkuni kusetyenziswe kwisithuba esinye akusoloko kufuneka kufane ukwenza uyilo oluhambelanayo; Iintlobo zamkelekile kakhulu kwindibaniselwano elungileyo njengoko kubonisiwe kuyilo lwekhitshi. Uya kubona ukuba imigangatho ngumthi we-teak wendalo, odityaniswe ne-Mahogany ebomvu yeekhabhathi eziphambili, i-walnut ekhanyayo kwisiqithi sekhitshi kunye nokugqitywa okumhlophe okumhlophe kwendawo encinci yokutyela. Ngaphandle kweendidi zokugqitywa kweenkuni ezisetyenzisiweyo, isabonakala ijongeka ilunge kwaye intle.
iingcebiso ngeentetho ezilungileyo zomntu
Usebenzisa iinkuni ezibomvu zeMahogany ekhitshini, esi sithuba sanamhlanje sifezekisa imvakalelo yetropiki yaseAsia ekhitshini laso. Ikhitshi eliphangaleleyo lisebenzisa iikhabhathi ezifanayo ezinemabhile emnyama, kwaye ngaphandle kombala omnyama, iindonga ezimhlophe kunye neefestile ezinkulu zinceda ukulinganisa le mibala imnyama kunye nokwenza ikhitshi eliqaqambileyo.
Iifestile ezinkulu zepanoramic zibonelela ngokukhanya kwendalo kweli khitshi likhulu lendlu, elenza ukuba isithuba sibonakale siqaqambe ngokwenene ngaphandle komgangatho ongwevu womthi. Kuba imigangatho sele imnyama, ikhitshi lisebenzisa umthi weplanethi okhanyayo ophuma kamnandi ngokuchasene nemigangatho yegrey edityaniswe neendawo zokubala ezingwevu eziqinileyo ukuze zilingane nomgangatho. Iziphumo kukujongwa okulungelelanisiweyo kwanamhlanje ngochukumiso oluqhelekileyo.
Eli khitshi libonisa ulungelelwaniso oluhle lweklasikhi kunye neesesthetics zangoku, ngaphandle kokuzidibanisa ukwenza ezi zinto zimbini ukudala ikhitshi eliphefumlelweyo ngokwesiko. Iikhabhathi ezisetyenzisiweyo yimephu eKhanyayo eKhanyayo eneenkcukacha ezilula zokuhombisa. Oku kubhangqiwe ngeethayile zendlela emarmore yomgaqo ongasemva, i-quartz engwevu yezinto zokubala eziphambili kunye nemarble emhlophe kwisiqithi sasekhitshini.
Uyilo lwasekhitshini lwesiko oluhlanganisa ubomvu kunye nobomvu. Uza kubona udonga olupheleleyo olugcina ukugqitywa kodonga lwazo lwezitena, unike eli khitshi ubuntu kunye nokuthungwa. Zonke iikhabhathi zekhitshi zisebenzisa ukukhanya kwemephu emhlophe enika ithoni etyheli, kunye nomphezulu wekhawuntara, igranite emnyama yayisetyenziselwa ukubukeka okuhle okujongeka njengokuhle ngombala wekhabhathi okanye ukugqiba.
Sebenzisa imibala elula kunye nefudumeleyo, olu luyilo lwekhitshi lwanamhlanje alunamthungo kwaye luyamema. Ukusetyenziswa kokugqitywa kweenkuni kwenza ukuba ibe lixesha elingenasiphelo, kwaye uyilo olulula lwekhabhathi ngokuqinisekileyo luya kutsala abo bathanda i-aesthetics elula yanamhlanje. Igranite emnyama engwevu esetyenziswe kwiikhawuntari kunye nodonga olupheleleyo lwe-backsplash longeza umahluko ocacileyo ngokuchasene nekhabhathi yemephu ekhanyayo, ukunceda ukongeza umbala ongathathi hlangothi kwigumbi elinetoni emthubi.
Ukugqitywa kweenkuni zeRustic ezisetyenziswa kwikhabhathi yesiseko sesiqithi esikhulu sekhitshi kufana kakuhle nomthi osetyenziswa eluphahleni, emgangathweni nasemacangweni. Isibheno se-rustic sokugqitywa kweenkuni sinika eli khitshi ukubukeka okuluhlaza kunye nelizwe, ukanti imiphetho egudileyo kunye nolungelelwaniso isasinika isibheno sanamhlanje. Ngaphezulu kwesi siqithi sasekhitshini kukho isirabha esiqinileyo sentsimbi, esongeza kwisibheno esihle sekhitshi, esiqaqanjiswe ngakumbi ngokusetyenziswa kwezibane zeglasi ezi-3 ukuzisa ingqalelo kwikhawuntara yesiqithi.
Ukusetyenziswa kweenkuni ezimnyama ze-wengue kwiikhabhathi zasekhitshini kudala umahluko olungileyo ngokuchasene nokukhanya okutyheli kweendonga zesithuba. Umdibaniso owahlukileyo unesibheno sanamhlanje, kodwa ipaneli elula kunye neenkcukacha zeekona zeekhabhathi zisayinika iklasikhi. Iithayile ze-Sage eziluhlaza eziluhlaza zazisetyenziselwa ukubuyela umva ukongeza umbala ocekeceke kodwa ohlaziyayo wombala kumphezulu.
Le yikhitshi entle kakhulu yanamhlanje enesitayile esincinci selizwe. Imibala esetyenzisiweyo yenza indawo efudumeleyo kunye neqaqambileyo eyenza le khitshi ibe mnandi kakhulu ekusebenzeni kuyo. Imigangatho yimaple eqinileyo kwaye udonga lucocekile, zinika indlela kwikhabhathi yeenkuni zeTeak. Iingcango zekhabinethi yekhitshi zineepaneli zomthi ezithe tyaba ezinika ilizwe ukuziva kunye nepateni eyongezelelweyo eyamkelekileyo kunye nokuthungwa.
Ikhitshi lesitayile esine-twist engaqondakaliyo. Isebenzisa isitayile esimnyama se-wengue birch iikhabhathi zasekhitshini ezinoyilo olulula kunye neenkcukacha ze-cornice. Ukuyinika uhlaziyo lwala maxesha, indawo emhlophe eqinileyo emhlophe isetyenziselwe iincopho zokubala, ukwenza ukucoceka nokujonga okungaxutywanga nto leyo eyahlukileyo ngokuchasene neekhabhathi ze-wengue.
Ngomgangatho omnyama wekhabhathi, umgangatho omnyama weplanga kunye nemibala ekhanyayo yemiphezulu yeetafile kunye ne-tile backsplash eli khitshi linika umahluko okhangayo. Igcwele ngokuthinta okuhle njenge-backsplash ene-inlay kunye ne-mosaic yimbaleki esi sithuba simema kwaye sifudumele. indawo yokutyela enkulu kunye neplani evulekileyo ilungele ukonwabisa kunye nokuxhoma kunye nabahlobo kunye nosapho ngelixa ukutya kusalungiswa.
Eli khitshi lisebenzisa ipeyinti eyahlukileyo enombala wekorale kwiindonga zaso ezimbini, zenza umphezulu ongqindilili wekhabhathi zasekhitshini. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa ii-veneers zendalo zeziqhamo, zikunika ubume bendalo obuhle kunye nobushushu bokhuni. Ukukunika inkangeleko yala maxesha, ubumhlophe obomeleleyo yayiyinto yokuzikhethela, gcina iprofayili encinci yoloo jongano lwanamhlanje. Kwi-backsplash, iithayile ezimhlophe kunye nezesilivere zazisetyenziselwa eludongeni olunye, ukongeza uhlobo oluhle lokuziva umphezulu.
Ukuya kwisibheno esimnyama nesimnyama ngakumbi, iinkuni ze-ebony yayizizinto ezikhethiweyo kwiikhabhathi zale ndawo yanamhlanje yekhitshi. Umbala ongwevu weenkuni uphuma kakuhle ngokuchasene neendonga ezikhanyayo ezimthubi. Ngaphezulu kwekhawuntari, umphezulu omhlophe oqinileyo wawusetyenziswa kwiikhawuntari eziphambili, ngelixa iibhloko zomthi zazisetyenziselwa isiqithi sekhitshi. Uyakuqaphela ukusetyenziswa kweethayile zesilivere yodonga eludongeni olupheleleyo lwekhawuntara enika indawo ekhazimlayo kwisithuba.
Esi sithuba ngokuqinisekileyo sandisa umbono oqaqambileyo wechibi ngokusebenzisa udonga olupheleleyo njengefestile elinceda ukukhanyisa indawo encinci yangaphakathi. Ikhitshi limane nje lihambelana nolwakhiwo lwangaphakathi lwendawo - iikhabhathi zihambelana nophahla lwenkuni oluqinileyo kunye nemiqadi eyenza ukubonakala kumanyene. Ukusetyenziswa kweekhawuntari ze-quartz ezimnyama kongeza umahluko owamkelekileyo ngelixa kugcinwa ukubukeka kwayo kwangoku.
Iitoni ezimthubi zibalasele kakhulu kweli khitshi, kuba ligxile ekugqityweni kwendalo kwezinto ezisetyenzisiweyo. Iibhloko ezinkulu zamatye endalo zazisetyenziswa emgangathweni, ngelixa iinkuni zeTeak eziqinileyo zibonakala zivelisiwe eluphahleni. Kwikhitshi, ialder yendalo eqinileyo kwizilaydi ezimileyo zazisetyenziselwa iikhabhathi. Kukugqitywa kwendalo kunye nesitayile sebhedi esinika ilizwe ukuziva kwaye ikwabonelela ngemeko yendalo.
Kule ndawo incinci yasekhitshini, ubuhle bemithi yeti teak begxininiswe kakhulu njengoko iikhabhathi zibekwe ngokuchasene nemvelaphi yokukhanya okungwevu. Umthi osetyenzisiweyo unokwahluka ngombala wendalo, ukongeza iphethini enomdla kumphezulu. Umphezulu omhlophe oqinileyo wawuyinto ephezulu ekhethwayo ukuze ingaphakamisi iikhabhathi zokhuni, kunye nokunika isibheno sanamhlanje nesipolishiwe.
Imigangatho emhlophe kunye neendonga zesithuba zinceda ukugxininisa kubuhle bemithi yeti yaseAsia esetyenziswa kwiikhabhathi zasekhitshini. Iinkozo zendalo ezixwesileyo zemithi zongeza ipateni yendalo kunye nokuthambeka kwisithuba, kunye nokongeza ukufudumala kokuziva konke. Isilayidi esingwevu sasisebenzisa umphezulu oqinileyo ngaphezulu kweekhabhathi zomthi ukugqibezela ngaphandle komthungo.
Ubuhle bendalo bomthi wompayini buqaqanjiswe kakhulu kuyilo lwangoku lwekhitshi. Eli khitshi libanzi, linophahla oluphakamileyo kwaye linemvelaphi emhlophe emhlophe engathathi hlangothi encedisa ukulinganisa iithoni zendalo zeorenji zekhabhathi zekhitshi. Ezi khabhathi zilula zifakwe ipeyinti zidityaniswe ngombala omnyama oqinileyo omnyama wokujonga okungagungqiyo kwale mihla. Isithuba esikhulu sikwavumela amava apheleleyo ekhitshi- ubume bokusebenza obuyi-L, isiqithi sasekhitshini kunye nenye ikhawuntari eyi-L kwikona engaphandle yendawo eyongezelelweyo yokusebenza, kwaye ikwasebenza njengekhawuntara yebar kunye nokwahlula phakathi kwekhitshi kunye nezinye iinxalenye zendlu.
Ukuya kubukeka buthambileyo, ngakumbi ubukhomokazi, iinkuni ezikhanyayo ze-cherry zazisetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini, zidityaniswe ngodonga lwepeyinti olukhanyayo kunye neekhawuntara zegreyite. I-backsplash isebenzisa iileyili zeceramic ezihambelana nombala wezinto eziphezulu ezisetyenzisiweyo, ukudala ukuvakalelwa kakuhle kulungelelwaniso. Iithayile zomgangatho wesilayidi zibonelela ngokudibanisa imibala enomdla kwisithuba.
Usebenzisa isibindi somthi oqinileyo ngesibindi kwiikhabhathi zasekhitshini, amehlo akho aya kuhamba ekhitshini. Iindonga eziluhlaza eziluhlaza ziyagcwalisa iitoni ezibomvu-orenji zomthi kakuhle kwaye ngumdlalo omkhulu wokubala amatye aqinileyo.
Ikhitshi elimnandi eliphefumlelwe ngokwesiko elisebenzisa iikhabhathi zemithi yetiak enesiphelo esimnandi se-matte kunye nekhabhathi yesiseko se-wengue kwisiqithi esikhulu sekhitshi. Zonke izinto zokubala zisebenzisa ilitye le-beige lenyengane, kwaye kwi-backsplash, iithayile zendalo zangaphantsi zasetyenziselwa ukulinganisa umbala ongaphezulu.
Ithoni etyheli yemigangatho, iindonga kunye nophahla zenza i-antique / indala imvelele esithubeni, kunye nekhitshi elingenamthungo elidibeneyo kule mvelaphi nangona inesibheno sanamhlanje. Iikhabhathi zasekhitshini zingumthi we-oki wendalo odityaniswe ne-granite emnyama-ethe nca, ngelixa i-barstools yintsimbi emnyama-epeyintiweyo eyongeza ukuziva kwindawo yoshishino.
Ikhitshi lesitayile selizwe elinomchukumisi wanamhlanje osebenzisa ukukhanya kwe-oki ekhanyayo iikhabhathi zekhitshi ezidityaniswe nemabula yemarble yaseCarrara enobumba obucekeceke bokujonga ngakumbi okukhazimlisiweyo kunye nala maxesha. Isicwangciso somgangatho ovulekileyo senza ikhitshi lingabi nzima nangona kusetyenziswa iikhabhathi zokhuni eziqinileyo.
Ngaphandle kwendawo encinci, le khitshi yayicwangciswe kakuhle ukuze indawo isetyenziswe ngokugqwesileyo. Kuyanceda ukuba ikhitshi linefestile enkulu ebonelela ngokukhanya kwendalo, ukuyenza ibonakale ikhanya ngakumbi kwaye inkulu. Iiplanga zomthi wom-oki ezikhanyayo zazisetyenziswa eluphahleni ukuze zenze umphumo, umthi ofanayo wawusetyenziselwa iikhabhathi zasekhitshini. Kwakusetyenziswa igranite emnyama, kwaye izixhobo zentsimbi ezisetyenzisiweyo nazo zazimnyama ukuyinika imbonakalo efihlakeleyo yemizi-mveliso.
Uyilo lwangoku lwekhitshi ngomthi we-oki lunokunceda ukugcina indawo ikhaphukhaphu. Ukugqitywa kwe-oki ekhanyayo kwiikhabhathi zekhitshi zomthi oqinileyo kunika isibheno esiluhlaza, esirustic kule ndawo yanamhlanje yekhitshi. Ikhitshi libanzi ngokufanelekileyo, lahlulwe langamacandelo amabini: enye yindawo yokubala eyi-L kunye nesiqithi kunye nenye ikhitshi kwigalari esecaleni. Zonke zisebenzisa iikhabhathi ezifanayo zokhuni kunye nekhawuntari emnyama yekhawuntari ephezulu, zenza ukucoceka, ukujonga okufananayo. Iindonga zesithuba zazipeyintwe ngombala we-beige ongathathi hlangothi, esongeza ukufudumala kwindawo, kunye nokukhanyisa, kwasetyenziswa ezimhlophe ezifudumeleyo phantsi kwezibane zekhabinethi kunye nokukhanya kwe-accent.
143 Uyilo lweKhitshi eNtofontofo - Iikhitshi eziMnyama eziMnyama - Uyilo lwale Khitshi lwanamhlanje - Iingcamango ezingama-77 zeSiqithi seKhitshi
Nksk. ndiphoswe okanye Mnu
ezimfusa nezimhlophe izimbali zomtshato
Wamkelekile kumqondiso wethu womtshato
Izimvo zesipho seminyaka emi-4 kuye
umama wexabiso eliphantsi lesuti yomtshato
ukutshata enkundleni yamatyala into yokunxiba
iinwele zomtshato zeenwele ezimfutshane ezisongekileyo